PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Akabuyanga udonald kuma-idols
Akabuyanga udonald kuma-idols
KUSOLWA isigcwagcwa ngokungabuyiselwa kukaDonald ekuqeqesheni abakwi- top 16 emncintiswaneni we-idols SA anonyaka. ILANGA Langesonto lihabule ukuthi lo mculi obekunguyena obeqeqesha abangenele, aphinde abaqeqeshe nangokusebenzisa iphimbo uma becula, ngeke asaba yingxenye yalo mncintiswano kulo nyaka.
Kuzokhumbuleka ukuthi ungene kulesi sikhala ngemuva kokushiya kuka-rj Benjamin obekungumsebenzi wakhe ukusiza laba baculi abasafufusa. Umthombo waleli phephandaba ongaphakathi kumzansi Magic, esakaza i-idols SA, udalule ukuthi nakuba udonald ebewenza ngokuzimisela umsebenzi wakhe nabaculi, kodwa abalandeli bebebukeka bengakuthokozeli ukuphawula kwakhe.
“Bekungathi abamthandisisi abantu ngoba noma enze umsebenzi oncomekayo kodwa ezinkundleni zokuxhumana, ubegxekwa, okuyinto okungenzeka ukuba uchithelwe yona,” kusho lo mthombo ocele ukungadalulwa.
Uthi abadidiyeli nezikhulu zesiteshi basazohlala phansi badingide ngozongena kulesi sikhala. Omunye umthombo nawo osondelene nawo lo mncintiswano, uveze ukuthi bekungathi unesigcwagcwa lo mculi kubalandeli balo mncintiswano ngoba nangesikhathi eyi- jaji eliyisimenywa nyakenye, abantu bebengayithakaseli imibono yakhe.
“Nakuba izinkundla zokuxhumana zingeyona into okumele uyiqaphele ngaso sonke isikhathi, kodwa uma njalo uzohlale uthola ukugxekwa kuba yinkinga engagcina iba nomthelela kulo mncintiswano ohamba phambili kuleli,” kusho umthombo.
Ugavin Wratten, ongumdidiyeli omkhulu walo mncintiswano, udalule ukuthi besingekho isivumelwano sokuthi uzobuya lo mculi njengoba bengakamqoki okuzoba nguyena ozosiza abaculi.
“Unyaka nonyaka sihlale sibhe- ka izinto ezintsha nezehlukile esizoqhamuka nazo ukuze lo mncintiswano uhlale uhamba phambili,” kusho ugavin.
Ukuphikile ukuthi udonald uchithelwe ukuba nesigcwagcwa noma obekushiwo ngaye ezinkundleni zokuxhumana.
“Njengoba bese ngishilo, besinesivumelwano sonyaka owodwa ebesingasivuselela uma sithanda, kodwa ngenxa yokuthi sihlale sibheka okuhlukile, asikasithathi isinqumo ngesikhala sakhe,” kusho ugavin enanela ngokuthi kusenesikhathi, basazohlala phansi babonisane ngokumele bamthathe asebenze nabaculi.
“Uma sekusondele isikhathi sokuqala kokucula bukhoma, sizomemezela ozosebenza nabaculi uma sikhona isidingo,” kusho ugavin, ophethe ngokuncoma ithalente labaculi abazobonakala kuma-idols SA nonyaka.
Umphathi wezindaba zikadonald, uthemba Molingoana, uqale wabuza intatheli ukuthi kumayelana nani ngesikhathi leli phephandaba lizama ukuxhumana nalo mculi.
Uchazeliwe wathembisa ukubuyela entathelini ngemuva kwemizuzu eli-10. Kuthe leli phephandaba limshayela futhi waphendula wathi udonald umatasa e- studio, uzoze akwazi ukuphendula imibuzo yezintatheli ngesonto elizayo.
U-DONALD kuthiwa akabuyiselwanga kwi-idols SA ngenxa yokungabi nalo ugazi kubalandeli balo mncintiswano.